Atolory ny Martech Zone Andininy | Martech Zone
Atolory ny Martech Zone Article
Aza manontany raha afaka mandefa lahatsoratra ianao, fotsiny atolory eto ny lahatsoratra. Tsy manam-potoana hijerena ireo fangatahana aho.
Manana fonosana iray ahazoam-bola aho mba hampitomboana ny fahafahan'ny marika misy anao:
Raha ny tanjonao dia fanovana rohy, mandehana azafady.
Tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny teknolojia marketing. Tsy ny vaovaon'ny orinasa, ny fampiroboroboana na ny fampiasam-bola
Karazan-teny: 700 ka hatramin'ny 2,000 ny teny, mamaritra ny olana, fomba fanao tsara indrindra hamahana ny olana, ary topimaso ny vahaolanao. Ampidiro rohy ahafahan'ny olona iray mandray dingana manaraka - demo, rindranasa sns.
Saripikan-tsary, sary, sary famantarana ary horonan-tsary dia atoro avokoa (farafaharatsiny iray).
Ny teny nalaina avy amina mpanorina na mpitarika eritreritra ao anatin'ny orinasa dia tena manohina tokoa.
Ny tranga fampiasana na tantaran'ny mpanjifa dia mahery vaika.
Raha te hanana mpanoratra ianao dia tsy maintsy manana adiresy mailaka manan-kery ho an'ny mpanoratra (tsy PR mafy) ary tsy maintsy voasoratra anarana miaraka amin'ny sary izy ireo Gravatar na sary misy.
Malalaka ianao mampiditra antso ho amin'ny hetsika hiverina amin'ny tranokalanao amin'ny fampisehoana demo, fisintomana sns ... ampahafantaro anay fotsiny.
Raha te hampiditra fitaovana ianao dia ampahafantaro anay. Manana fitaovana maromaro izahay miaraka amin'ny fifanarahana fanondroana amin'ireo orinasa ireo.
Ity misy ohatra iray matanjaka izay niara-niasa taminay Rindrambaiko Act-On.
Malalaka isika manitsy ny atiny, mamolavola azy, manaisotra azy, manavao azy, mamily azy, na manao zavatra hafa miaraka aminy mba hiantohana ny famoahana famoahana kalitao ho an'ny mpamaky anay.
MM manapoka DD slash YYYY
Amin'ny fandefasana an'ity takelaka ity dia manaiky ireto rehetra ireto ianao.
Tsy karamaina aho mametraka backlinks na manatsara ny laharan'ny fikarohana
Izaho dia mandefa atiny am-boalohany nosoratan'olona tena izy
Azoko amin'ny alàlan'ny fandefasana an'ity atiny ity fa azo ahitsy na esorina amin'ny fotoana rehetra izy io raha tsy mahazo alalana amiko
Fantatro fa tsy misy fiantohana navoaka ny lahatsoratra na fandaharam-potoana famoahana
Orinasa, vokatra na serivisy*
Mampiditra ny tena lahatsoratra ve ianao?*
Ny lahatsoratra rehetra dia tokony ho 100% am-boalohany ary tsy apetraka amin'ny tranokala hafa. Tokony ampidiro ao koa ny anaran'ny mpanoratra, ny adiresy mailaka ary ny headshot.
Tsia - hofafana ity fangatahana ity.
Eny - nataoko izay rehetra nangatahinao.
Eny - fa izahay no maniry Douglas Karr ho mpanoratra
Adiresy mailaka an'ny mpanoratra
Ny bylines an'ny mpanoratra dia TSY ekena raha tsy misy ny adiresy mailaka mivantana an'ny mpanoratra. Tsy misy maningana.
Andianteny 2 ka hatramin'ny 4.
Headshots, pikantsary ary / na firaketana
Karazan-drakitra ekena: jpg, gif, png, doc, zip, docx, Max. haben'ny rakitra: 50 MB.
Izay lahatsoratra byline dia mitaky anarana tena izy, adiresy mailaka mivantana amin'ny mpanoratra, headshot, ary tantaram-piainana fehezanteny 2 ka hatramin'ny 4. Azontsika atao koa ny mampiditra adiresy mombamomba anao. Azafady zipitao ary apetraho.
Manana tolotra na antso-hiasa ianao?*
Raha manome tolotra amin'ny lahatsoratrao ianao, dia hahazo valiny tsara kokoa. oh. Mampiasà kaody MARTECHZONE AZY 10%. Azafady mba omeo ny rohy itodiana.
Raha manana programa afiliana azonao idirana izahay dia azo inoana fa hamoaka an'ity izahay.
Raha eto ianao ...
Te-hisoratra anarana amin'ny gazetinay ve ianao?